घोषणा भयो ‘पोइ पर्‍यो काले’
प्रकाशित : सोमबार, जेठ ०६, २०७६१९:०३
फिल्म । ‘तिमि सँग’ फिल्म मार्फत निर्देशनमा डेब्यु गरेका कलाकार शिशिर राणाको निर्देशनमा दोस्रो फिल्म ‘पोइ पर्‍यो काले’ निर्माण हुने भएको छ । राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दो चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराई र चलचित्र पत्रकार संघका अध्यक्ष सन्दिप सापकोटाले संयूक्त रुपमा फिल्मको मुहूर्त गरे ।
औपचारिक घोषणासँगै कात्तिक ८ गते दिपावलीमा फिल्म प्रदर्शनमा आउने निर्माण टिमले घोषणा पनि गरेको छ । जेठ १३ गतेबाट छायांकन सुरु हुने फिल्ममा अभिनेत्री पूजा शर्मा र अभिनेता सौगात मल्लले श्रीमान्-श्रीमतीको भूमिका निभाउँदैछन् । सौगातकै वरिपरि फिल्मको मूल कथा घुम्नेछ । साथै , यसमा आकाश श्रेष्ठ, सृष्टि श्रेष्ठ, सोहित मानन्धर, राजाराम पौडेल, बिन्दा खतिवडा, जयनन्द लामालगायतका कलाकारहरुको पनि अभिनय रहनेछ । फिल्मको कथा निर्देशक राणा स्वयंले लेखेका हुन् ।
फिल्मको कथावस्तुमा फिट हुने भएकै कारण सौगातलाई टाइटल क्यारेक्टरमा छनोट गरिएको निर्देशक राणले बताए । शिव ढकालले खिच्ने फिल्मका गीत रघु परियार र हरि उप्रेतीले लेखेका छन् । भने, संगीत सुवास भुषाल र पुरुषोत्तम न्यौपानेले भरेका छन् । गीतमा कविराज गहतराज, रामजी लामिछाने र रविन शाहको कोरियोग्राफी रहनेछ । तारा प्रकाश ‘किम्भे’ को सम्पादन रहने फिल्मको प्रस्तुतकर्तामा श्याम बहादुर थापा रहेका छन् । दिपक मनाङ्गे र अ. देवि राई निर्माता रहेको यसफिल्मको कार्यकारी निर्मातामा किरण नेपाली र रधु परियार छन् । सह-निर्मातामा अर्जुन खनिया र देव तामाङ रहेका छन् ।
रहेनन् अध्यक्ष बोगटी
‘चोट लागेको हात चार महिनापछि उपचार गराएँ’
‘गल्ली ब्वाई’ को कमाइ कति ?
‘मेरो मुटु’ सार्वजनिक (भिडियो)
हिरानीको फिल्ममा शाहरुख